I-HomePod Mini vs HomePod-Isikhokelo sokuthenga | IPhone iindaba
I-HomePod Mini vs HomePod-Isikhokelo sokuthenga
UAlex Vicente | | IPod Home
Kule nyanga, U-Apple utyhile ukukhutshwa kwemveliso entsha yamakhaya ethu, i-HomePod Mini. Yenze njalo ngemodeli entsha okokuqala ukusukela oko kwasungulwa i-HomePod kubandakanya uyilo olujikelezayo oluza ecaleni kwenkqubo ye-S5.
Enye yezona zinto zibalulekileyo kwi-MiniPod Mini yeyayo Ixabiso, eliya kulahla liye kwi-99 , yenza ukuba ifikeleleke ngakumbi kuluntu ngokubanzi kunePodPod yentsusa. Iyaqhubeka ukuthengisa nge- € 299, iphindwe kathathu kwixabiso lemodeli entsha yeMini. Ngaba kufanelekile ukuthenga imodeli yoqobo okanye iMini entsha? Ngalesi sikhokelo siya kuzama ukukukhokela kwisigqibo sakho ngokusekwe kwezona zilungele iimfuno zakho.
1 Thelekisa iPod yasekhaya kunye neMini yePod yasekhaya
3.2 Itekhnoloji yesandi
3.4 Inkqubo kunye neSoftware
3.5 Ukuqonda indawo
3.6 Chip yeU1
3.7 Isandi sestiriyo
3.8 Itheyibhile yasekhaya ene-Apple TV 4K
4 Uluvo lomntu
Thelekisa iPod yasekhaya kunye neMini yePod yasekhaya
I-HomePod yoqobo kunye ne-HomePod mini yabelana ngenani leempawu ezinjenge-multiroom (multiroom) isandi kunye neSiri. Uluhlu lweApple lulandelayo phakathi kwezi zimbini.
Ukunxibelelana ngesandi kwestereo
I-Siri kunye nescreen ngaphezulu kwesixhobo
IHub yasekhaya eyiSmart
Fumana ezam, iindlela ezimfutshane zikaSiri, izandi eziMbi, kunye neeAlarms zoMculo
Ifumaneka ngombala omhlophe kunye nendawo engwevu
I-Apple iphakamisa ukuba zombini ezi zixhobo zinokubaluleka okufanayo, nangona kunjalo, Umahluko mkhulu phakathi kweemodeli ezimbini zeKhayaPod ngokuqinisekileyo ezinokuba nobunzima ngakumbi xa usenza isigqibo kwenye okanye kwenye. Lo mahluko ukwacacisa umahluko kwixabiso phakathi kwelinye kunye nelinye.
Sizahlulahlula iyantlukwano kwimiba eyahlukeneyo ehlala yonke imveliso
I-MiniPod Mini incinci kakhulu kunePod Home yasekuqaleni njengoko sinokuqikelela kwigama layo. Ngelixa iMini yePod yasekhaya imile kancinci kwi-9cm ubude, i-HomePod yoqobo ime kwi-17,2cm. Ukongeza, i-MiniPod Mini igcina uyilo olungaqhelekanga xa kuthelekiswa nobume be-cylindrical okanye i- "capsule" ye-HomePod Original.
Zombini ezi zixhobo zigutyungelwe luhlobo olufanayo lwelaphu oluthanda ukuhamba kwesandi ngalo kwaye babelana ngescreen esikwiindawo eziphezulu apho ungabona khona umzobo weSiri xa sicela. Zombini zibandakanya amaqhosha olawulo lwevolumu kweli candelo lesixhobo.
Okokugqibela, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba zombini ezi zixhobo zixhomekeke kwisokhethi ekhanyayo, Oko kukuthi, akukho nanye kuzo ephathekayo.
Uyilo olungqukuva lweMini yePod yasekhaya inobukrelekrele ngakumbi kunasekuqaleni kwaye zihlala zikhethwa kwiindawo apho indawo incinci, njengetafile esecaleni kwebhedi. Kwelinye icala, ukuba unendawo enkulu, unokukhetha i-HomePod yoqobo ecaleni komabonwakude okanye indawo ebanzi ngakumbi.
El hardware iaudiyo yeyona nto ngokungathandabuzekiyo eyahlulahlula uninzi ukusuka kolunye uhlobo ukuya kolunye. I-HomePod Mini ibonelela ngesilawuli esinye esigcweleyo, sixhotyiswe ngemagneti ye-neodymium kunye nesibini seerediyitha ezihamba kunye netekhnoloji Ukurhoxisa ngenkani, Ukuvumela izandi zebass ezinzulu kunye nokucaca kwamaqondo aphezulu.
Kwelinye icala, i-HomePod yoqobo ibandakanya enkulu woofer iyilwe yiApple yeebass ezinzulu, ezicocekileyo kunye neseti yesiko lesixhenxe Iitwitter Banikezela ngama-acoustics amsulwa aphezulu, nganye inesikhulisi sayo kunye nolawulo lwesikhokelo. I-HomePod yoqobo, enkosi kwezi mpawu zobuchwephesha, iya kubonelela ngesandi esinzulu nesizeleyo kunomntakwabo omncinci.
Ukuba uncamathisela ukubaluleka kumgangatho wesandi kwaye uyakwazi ukwahlula phakathi kwesandi esihle kakhulu kunye nesandi sepremiyamu, ngaphandle kwamathandabuzo iPodPod yantlandlolo lukhetho lwakho.. Uyakonwabela isandi esimangalisayo naphina apho uyibeka khona.
I-HomePod Mini isebenzisa ii-microphone ezintathu ukumamela imiyalelo yethu ye- "Hey Siri" kunye Imakrofoni yesine ejonge ngaphakathi inceda ukwahlula isandi esivela kwisithethi ukuphucula ukubonwa kwelizwi xa umculo udlala. I-HomePod yoqobo isebenzisa ii-microphone ze-6 ngenxa yesi sizathu.
Ezi microphones zikuvumela ukuba urhoxise i-echo kwaye uvumele uSiri ukuba aqonde into ebuzwayo nokuba ukufuphi okanye ukude kwisixhobo nokuba sidlala umculo. Ngaphandle kwePodPod yasekuqaleni enenani eliphezulu leemakrofoni, Oko akuthethi ukuba umahluko omkhulu ekusebenzeni phakathi kwezi zimbini kwaye ngekhe ube ngumahluko obonakalayo xa ukhetha imodeli. Bobabini baphendula ngokumangalisayo kwizicelo zethu.
Inkqubo kunye neSoftware
I-HomePod yoqobo ibandakanya i-chip ye-A8, efanayo naleyo yayisetyenziswa ngemini yayo yi-iPhone 6, i-iPad mini 4 kunye ne-Apple TV HD, ngelixa i-HomePod Mini isebenzisa i-chip ye-S5 efakwe yi-Apple Watch Series 5 kunyaka ophelileyo kwaye kulo nyaka nalo SE.
Zombini iiprosesa zivumela zombini iimodeli ukuba zisebenzise isoftware ebalaseleyo yemodeli ye-acoustic ngexesha lokwenyani, ukwenza umzila wesandi kunye nokucinywa kwe-echo.
Ngendlela efanayo neyeemakrofoni, inyani yokuba imodeli ibandakanya i-chip enye enye enye ayifanelekanga ukwenza isigqibo. Zombini zinamandla amaninzi okusebenza kwaye awuyi kuqaphela ukuba ikwi-HomePod yoqobo indala.
I-HomePod yoqobo isebenzisa ukuchongwa kwendawo ukuze "izifumanele" ngaphakathi kwigumbi esilibeka kulo. Oku kuvumela i-HomePod ukuba ichonge kwaye ilingana negumbi ukukhupha kwaye ijolise kwisandi ukuze ikhuliswe kwaye iviwe kangangoko kunokwenzeka. Ndiyabulela kule teknoloji, ibona iikona kunye neendonga kwaye Iyanciphisa ukugqabhuka kwesandi kunye ne-echo.
I-MiniPod Mini ayinalo olu phawu. Ayilungeli kwigumbi esilibeka kuyo kwaye iya kuhlala ikhupha isandi ngendlela efanayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, kwiindawo ezinkulu i-HomePod yoqobo iya kuba lukhetho olungcono kwesi sizathu ngokunjalo.
Kule nkalo, i-MiniPod Mini yahlukile kwi-HomePod yoqobo. Ibandakanya i-chip ye-U1 eyilelwe yiApple evumela ukusebenza kunye nezinye izinto ezikufutshane eziqulathe ngendlela ebhekisiweyo.
Ngale ndlela, i-HomePod Mini ibhaqa ezinye izixhobo ezine-chip ye-U1, enje nge-iPhone 12. Oku kuvumela unxibelelwano olukhawulezayo phakathi kwaba babini kunye nokutshintshiselana ngolwazi phakathi kwabo nanini na xa besondele.
Ngapha koko, amandla e-chip ye-U1 kusafuneka acofwe. Kwixesha elizayo elinokuthi liququzelele ukuhanjiswa kwedatha, liphucule amava okwenyani angakumbi okanye libeke ezinye izinto ngaphakathi. I-Apple yongeza le chip kuzo zonke izixhobo zayo, ngokuqinisekileyo Kwiminyaka ezayo siza kubona ukusebenza okutsha okujikeleze le chip.
Isakhono sokuseka isandi se stereo ngokongeza isibini okanye eyintsusa yePodPod Mini kule esele sinayo iyafumaneka kuzo zombini iimodeli. Gcina ukhumbula ukuba ayinakudityaniswa kunye nalo msebenziOko kukuthi, asizukukwazi ukuba nesandi sestiriyo ngePodPod yentsusa esidibanisa kuyo iMini okanye ngokuchaseneyo. Zombini kufuneka zibe yimodeli efanayo.
Zombini ziyakwazi ukwenza isandi esine-multiroom kwaye zinokusetyenziselwa ukudibanisa oku kusebenza, kodwa hayi isandi sestereo.
Itheyibhile yasekhaya ene-Apple TV 4K
I-HomePod yoqobo inenkxaso yeqonga lasekhaya kunye ne-Apple TV 4K. Oku kuvumela I-HomePod ibonelela ngamava emidlalo yokubonela ekhaya xa uqhagamshelwe kwi-4K Apple TV, ukubonelela ngesandi esingqonge kunye neDolby Atmos.
Eli nqaku lisekwe kwindawo echongiweyo evela kwiPod Homel, yiyo loo nto iMini yePod yasekhaya ingenayo. Ukuba uza kudibanisa i-HomePod oyithengileyo kwi-Apple TV 4K yakho, ngokuqinisekileyo uya kufuna ukulithatha eli nqaku xa usenza isigqibo.
Ngokucacileyo zombini ezi mveliso zinenjongo kwaye mhlawumbi zingabaphulaphuli abahlukileyo. Ngelixa I-MiniPod Mini inokuthi ijonge ngakumbi kuluntu ngokubanzi kwaye ikhuphisane nezixhobo ezininzi ze-Alexa kunye neGoogle, i-HomePod yoqobo ijolise kubaphulaphuli abakhethiweyo.
Amandla esandi i-HomePod yoqobo evumayo ukuba ibekho isixhobo sabathandi bomgangatho wesandi, Jikeleza isandi kunye nabo bafuna ukuseta imeko-bume ye-Apple ngezona zinga liphezulu ekhaya.
Nokuba yeyiphi na imveliso oyikhethayo, bobabini baya kuhlala ngoku kulindeleyo. Sishiyele kumagqabantshintshi uluvo lwakho kwaye yeyiphi isixhobo osigqibe kuyo emva kokukwazi ukuthelekisa zombini iimodeli ngeenkcukacha ezinkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » IPod Home » I-HomePod Mini vs HomePod-Isikhokelo sokuthenga
Itshaja entsha yeMagSafe iyacotha iphindwe kabini kunetshaja yekhebula
Itshaja yeMagSafe ishiya amanqaku kwiifowuni ezili-12